Bridal Show Mazano eVatengesi uye Keke Kushongedza - Blog
Bridal Ratidza Mazano eVatengesi Uye Keke Kushongedza
Bridal Show Mazano Kune Vatengesi Uye Maitiro Ekuita Izvo Zvakawanda Kunze KweBridal Expos
Bridal show matipi ayo anoshanda chaizvo anogona kunge akaoma kuuya nawo. Zvinoita sekunge munhu wese ane zvinhu zvinovashandira asi zvinogona kusashandira vamwe. Aya ndiwo matipi angu akanakisa ekuroora ekuroora andakashandisa anopfuura makumi maviri emadhirowa ekuratidzira uye kufumura mumakore gumi apfuura.
Kudzoka mu2012, ini ndanga ndiri pakukwiridzira! Ini ndaipinda yega yega yekuratidzira yemuchato, kufemerwa kupfura ndikati ehe kune ese bridal magazini chikumbiro. Ndichitarisa kumashure, ndaive ndakapenga ndakabatikana asi zvakanyanya kukosha, ndanga ndichiita zvakakosha zvikuru kubatana pabasa rangu rekeke uye ini ndaisatombozviziva.
Sei ndichigovana izvi newe?
Zvakanaka, iwe unogona kunge uchifunga nezvekuenda kumuchato, kuratidzira kupfura kana kuendesa keke dhizaini kumagazini uye uchishamisika… izvi zvakakosha here? Chii chandichawana kubva pane izvi?
Ini handigone kutaura kune wese munhu asi ini ndinogona kutaura nezvezviitiko zvangu. Aya anotevera mapikicha mashoma kubva ku2012 uye ini ndichakutaurira kuti chiitiko chega chega chakandibhadharira chii, chakandiwana uye chii chiri kubhadhara nanhasi.
maitiro ekushongedza keke nemaruva chaiwo
Bridal Show Mazano - # 1 Gadzira Yakasarudzika Keke Dhizaini
Yekutanga uye yakakosha maroora show yandakambopinda yaive iyo Kuroora Me Bridal Show . Sei iyi yaive yakakosha? Iyi show inonyatso tarisa pane keke remuchato, uye kusiyana nemamwe mashoo, ivo vakandimanikidza kuti ndive nehunyanzvi. Ini ndakapihwa makumi maviri emabhodhi ekurudziro ane madingindira akasiyana emichato uye ini ndakapihwa basa rekugadzira keke remuchato zvichibva pane iro bhodhi rekuratidzira. Imwe neimwe keke yaive nayo yega tafura uye yaitaridzwa pamwe neyekufemerwa bhodhi.
Pamberi pechiratidziro ichi ini pachokwadi ndakanga ndisati ndambogadzira keke remuchato kubva kufemerwa. Kazhinji varoora vaindiunzira keke dhizaini yavakawana paPinterest uye ini ndaigona kuibvisa zvishoma asi ini handina CHOKWADI kuziva nzira yekugadzira kusvikira chiitiko ichi chakandimanikidza.
Pamberi pechiratidziro ichi ini pachokwadi ndakanga ndisati ndambogadzira keke remuchato kubva kufemerwa. Kazhinji varoora vaindiunzira keke dhizaini yavakawana paPinterest uye ini ndaigona kuibvisa zvishoma asi ini handina CHOKWADI kuziva nzira yekugadzira kusvikira chiitiko ichi chakandimanikidza. Kunze kwemakeke aya, mana akaenderera mberi nekumisikidza hutachiona hwemuchato (rustic birch keke, yepepuru bling keke, art deco keke uye grey uye yero resi yemuchato keke), imwe yakandiburitsa mumagazini yangu yekutanga NDE ndikawana butiro (grey lace Keke remuchato) nezvimwe zvisingaverengeke mumablog. Zvakanakisisa zvakadaro? Ndakagadzira kushamwaridzana kusinganzwisisike nemutori wemifananidzo uyo akatora mifananidzo yemakeke ese, varongi vemuchato avo vakabva vandikoka kumafaro ekufemerwa kwandakaonekwa nevamwe muindasitiri kusanganisira makambani ekurenda akafanana Chimwe Chinhu Chakakweretwa uye florists vakaita Swoon Floral Dhizaini wandiri shamwari naye uye ndinoshanda pamwe pazvirongwa kusvika nhasi.
Bridal Show Mazano - # 2 Maindasitiri shamwari akaita segoridhe!
Rega ndikutaurire, hapana chinhu chakakosha kupfuura shamwari dziri muindasitiri. Zvakafanana nekuwanda kwekusvikira kwako nekubatana kwega kwega. Chero nguva iyo mumwe munhu paanoda keke, ini ndinowana vafotori, vaflist, nzvimbo, marendendi uye kunyangwe vapepeti vemagazini vachipa ruzivo rwangu uye nekudzoka, ini ndinoita zvimwe chete. Pamwe chete isu takasimba zvakanyanya kupfuura kupatsana.
Ini handigone kusimbisa zvakakwana kuti zvakakosha sei kusvika kune vamwe vatengesi pazviratidzwa. Ingovapa chidimbu chekeke kuti vaputse chando. Izvo zvinowanzo shandira ini.
Bridal Ratidza Mazano - # 3 Yekuratidzira Bridal Ratidza Vendor Yekutarisa!
Vanhu vazhinji vanondibvunza zvavanofanira kuunza kumuchato. Iyi kinda inoita kunge isingaite-brainer kwandiri asi pamwe vanhu vanopfuura-vanofunga nezvayo. Iwe uri wekushongedza keke handiti? Uyai nemakeke! Kwete chete blah makeke futi. Makeke anoratidzira hunyanzvi hwako. Makeke anotora mukana weanopisa mafambiro izvozvi. Makeke anozokwezva mwenga allllll the way kubva mhiri kwekamuri uko kwaanenge achizungunuswa nevekudya grocer uye vovakwevera mukutyisidzira ndiko makeke ako!
Anoshamisa mhemberero yemuchato ine yakawanda yakawanda nyowani maruva muRustic maitiro. Vanofara vachangobva kuchata vachitsvoda
Zvimwe zvinhu zvekufunga kuunza:
Uyai nemakeke aunoda kugadzira! Kunyangwe yakavezwa, yakashongedzwa, yakashongedzwa kana yechinyakare. Varoora vanoodha zvavanoona.
Postcard saizi yakapihwa neese ako info pavari uye mamwe akanaka emhando yepamusoro mafoto ebasa rako. Ini ndinoraira yangu kuburikidza ne vistaprint.com uye iri chaizvo isingadhuri yehunhu. Usakanganwa makadhi ebhizinesi
Email tsamba tsamba yekunyoresa fomu! Govera kushomeka pane odha dzemunguva yemberi kana vachati vakanyorera tsamba yako, chishandiso chakakosha kwazvo chekutevera uye kuzvichengeta iwe 'uchionekwa' kune vangangoita vatengi
Samples dzakanakisisa keke rako. Vamwe vanoita makeke asi ini ndinonzwa kuti ibasa rakawandisa, kunyanya kana zvimwe zviratidziro zvingave nemazana evashanyi. Taigara tichiuya nemakeke emasheets tichiatambidza pamapepa enyama. Uya neshamwari kuti ikubatsire kutsemura uye kushumira. Basa rako rinofanirwa kukwazisa uye kutaura.
Portfolio yemamwe makeke. Vamwe vanopurinda inova yechinyakare asi inogona kushanda. Ini ndaive nesiraidhi-show yemakeke aimhanya zvekuti vanhu vazhinji vaigona kutarisa panguva.
Dzimba dzekushongedza. Kune nzira dzakawanda dzekumisikidza dumba. Iyi inotevera mienzaniso mishoma asi zvakanyanya iwe unoda kuti mamwe ma risers asimudze makeke kumashure (kazhinji keke anomira kana mamwe mabhokisi akareruka anozoita) mamwe ekushongedzwa kwetafura ayo anonongedza iwo maitiro ese semavhasi emaruva, mahwendefa anobata kana zvishongedzo zvidiki. . Kumashure. Izvi ndezvokuda asi zvinogona kuwedzera kuita kukuru! Ndakaita machira, bepa, huni. Zvakanaka chaizvo zvese. Kuva nenzvimbo inonakidza kunobatsira vatengi vangango kurangarira iwe gare gare uyezve kukwezva vamwe vatengesi muindastiri.
# 4 Bridal Ratidza Booth Pfungwa
Zvino ndapota usatonga setup yangu. Panguva iyo steampunk yaive yese hasha lol.
sei chando tsvuku yevelvet keke
Asi setup iyi yakariita basa. Aya makeke akaudza munhu wese aifamba ne 'Ah hesi uko, handisi wako wepakati anofinha keke'.
Pavaingosvika padhuze zvakakwana kuti vatarisane nemaziso, ndaikurumidza kuzvizivisa, ndovatambidza chidimbu cheBEST flavour yekeke ndovabvunza kuti pavanoroora kupi, chii chaive dingindira remuchato uye kana vaida setup kuravira. Ndakave nechokwadi chekuvabvunza kuti vanditumire email asap sezvo karenda yangu yanga ichizadza nekukurumidza (nguva dzose zvakanaka kuisa kukurumidza mukati imomo).
# 5 Bata Nemunhu Wese!
Ndine varoora vazhinji kubva pachiitiko ichi asi chakakomberedza chaive icho chidiki chegoridhe nekeke regirini kurudyi. Iwe unoona iyo yaive pfungwa yekeke yandaive nayo mupfungwa dzangu apo iyo Pantone ruvara rwegore rwaive emerald. Pandaive ndichibva pachiratidziro, ndaive ndakatakura keke iri kuenda kumota uye muridzi wemifananidzo akandimisa munzira dzangu. Akakatyamadzwa nekeke rakanaka uye akabvunza kana ndaizoda kushanda naye pakurudziro. Ndakanga ndisingazive kuti kufemerwa kupfura kwaive chii asi ini hangu ndakati hongu. Ini ndinoda kutaura kuti hongu uye ndoziva ruzivo gare gare. Pane whim ndakamupawo keke rangu remuchato rekodhi iro raaifunga kuti raizonakidza 'zvikomba'. Ini chaizvo handina kufunga kuti zvese izvi zvakakosha asi ndiyo yaive keke rangu rekutanga remuchato kuenda kuhutachiona uye kunyatso kuseta maitiro. Ona zvizere kufemerwa kupfura pano.
Mufotori uya aive Hazelwood Mufananidzo uyo akaenderera mberi achitora mifananidzo yakawanda yemakeke angu anosanganisira rustic birch keke uye yegungwa muchato keke uye kunyange nevanasikana vangu vekutanga zuva rekuberekwa. Zvese izvo zvakaenda nehutachiona, muchidimbu ndine chokwadi nekuda kwehunhu hunoshamisa hwemufananidzo!
Kufananidzirwa pazasi pane iwo mapikicha andaive nawo eaya ISE makeke (ini ndaive ndisina kana pikicha yebhodhi uye Indian keke) Kwete chaiyo hutachiona hwakakodzera.
Chinhu chakanakisa nezveiye anotora mifananidzo anotora mapikicha anoshamisa emakeke ako? Ivo vanoendesa aya mafoto kumagazini, mablog uye zvimwe zvinosvika kure masosi. Nekuda kwemufananidzo uyu, ndakaita kuti makeke angu abudiswe pamusoro 100 layer keke , shangu dzemuchato dzakasvibirira , Mod yemuchato nedzimwe nzvimbo dzisingaverengeke. Iyi mifananidzo zvechokwadi inotora matani ekusvika nevaroora, avo vachati vanobaya iyi mifananidzo uye usati wazviziva iwe, maitiro akaita sekibhodhi keke rinoputika! Kana izvi zvikaitika kamwe, ndinogona kuzvidaidza kuti kurwara asi kana? Nah… Zviitire wega shamwari yemapikicha.
Chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika panguva yemuchato wangu wekutanga kuratidzira kwaive kusangana nevamwe vane tarenda vatengesi avo vangotanga uye vachitarisa kuzviitira zita. Ndinoyeuka kekutanga nguva pandakamboona basa remudiwa wangu wemaruva, Swoon maruva dhizaini uye ndakanga WOWEDZA! Handisati ndamboona muhupenyu hwangu maruva akadaro. Ini nekutya ndakazvizivisa ini uye munguva pfupi isu apo tichironga kubatana pane mamwe makeke.
Kubva ipapo hatina kungomhanyidzana mukati menguva dzinoverengeka panguva dzekutakura keke asiwo panguva yekufemerwa kupfura! Anoshandura nyanzvi dzemuchato dzinofarira kushanda nevanhu vamwe chete kakawanda uye kana iwe uine mutori wemifananidzo uye murongi wemaruva waunoda kushanda naye uye ivo vauinavo, mese muchawana rimwe basa nekufamba kwenguva uye zvinogara zviripo nzira iri nyore kushanda nevanhu vaunoziva! Masitaera ako anozobatana pamwe uye kutaurirana kuri nyore. Iye akatobatana neni pachiitiko che Zvinotyisa Keke Yemuchato kugadzira maruva anotonhorera anotonhorera edu pasi peGungwa kupenya-mune-iro-rerima keke remuchato.
Saka chii chinoitika kana iwe ukasaita CHIMWE kubatana nevamwe vatengesi panguva yemuchato?
Anofara mukadzi anoshanda muchitoro chevachati uye achinyora manotsi mudhayari. Mukadzi weAsia musoni anoshanda mubridal boutique.
Usanetseke. Mashiripiti ANOGONA kuitika! Imwe yemakeke andakagadzirira iyi yekuratidzira yemuchato yaive yakajeka grey keke ine mamwe marara pombi uye yakapusa maruva yeyero (kana zvirinani ndaifunga kuti yaive pachena). Izvo zvakacherechedzwa nevanhu chaivo pazviratidziro (ndichiri kusava nechokwadi kuti ndiani) uye rimwe zuva ndakafonerwa kubva kuPortland Mwenga uye Groom Magazine ndichibvunza kana ndaigona kuvaita imwe vhezheni yekeke kuti ibudiswe mumagazini! SQUEE !! Izvi zvaive HUGE kwandiri. Kwete chete ini ndakanga ndisati ndamboburitswa asi Portland Mwenga uye Groom ndiyo yaive hombe yemuno yemuchati magazini munzvimbo medu saka ndinenge ndave kusvika kune yangu yakanangwa musika. Kwete chete ini ndakaburitswa asi ini ndakawanawo iro BUTIRO! Mhoro! Handimbofi ndakakanganwa kunzwa kwekuona keke rangu pabutiro remagazini kekutanga.
Mupepeti akada keke iri zvakanyanya, iye akandikoka kuti ndigadzire zvakare kune rakanakisa rePortland Mwenga uye Groom Magazine pati kuti igopihwa kune vese vashanyi. Ndinoyeuka ndichinzwa ndisina kunetseka pamutambo iwoyo. Ini ndaive nemurume wangu asi isu tanga tisingazive munhu. Takasarudza kugara patafura nemumwe mukadzi anga akagarawo ega uye achiratidza kusanzwisisika. Ainzi Krissy Allori uye aive mumwe (ipapo) wemuchato wemifananidzo. Isu takava shamwari dzinokurumidza uye kubvira ipapo akapfura ingangoita yega yega yemusoro wemusoro wangu, akanditorera ese mafoto bhuku uye takabatana pamapurojekiti asingaverengeke pamwechete. Chazvino uno hofori yekudya keke paFood Network show, Anoseka Makeke mukupemberera kwake kutsva Blog !
sei kugadzira yakaoma yakaomeswa kirimu
Unoda mamwe keke mazano? Tarisa uone iyo 2018 keke remuchato maitiro kubatana!
Pane imwe nguva pandakaburitswa muPortland Mwenga uye Groom, zvimwe zvinopihwa kubva kune mamwe magazini zvakatanga kuuya. Pasina nguva refu, ndakakumbirwa kugadzira yakasviba chokoreti yemuchato keke nemabriji matsva kune imwe yemahotera akanaka muPortland. Ndakanga ndisingazive chero wevamwe vatengesi uye ndarangarira ndichinzwa kusanzwisisika mune yangu buttercream yakasviba mbatya uye bundu rakashata pandakasvika kumisikidza keke rangu. Ihotera yacho yaive yakanyanya uye vamwe vese vatengesi vaitaridzika kunge vakaiswa pamwechete. Ndinoyeuka ndichidonhedza iro keke uye ndichibvisa heki ipapo. Chandisina kuziva ndechekuti basa rangu rakanga rabata ziso remumwe wevamwe vanhu vaivapo, Lane anobva Chimwe Chinhu Chakakweretwa PDX . Panguva iyoyo iye aingotanga kunze asi aive achikura nekukurumidza mukuda kweziso rake rinoshamisa uye kuravira kukuru. Akafarira zvinhu zvangu uye akandikumbira kuti ndimugadzirire keke nguva pfupi yapfuura yechinhu chinonzi 'kukurudzira kupfura'. Ndikati hongu chokwadi.
Bridal Show Mazano # 6 - Re-shandisa Keke Dhizaini
Kukurudzira kupfura ndiko uko boka revatengesi vemuchato vanoungana pamwe voita 'muchato wekunyepedzera'. Wese munhu anopa nguva yake uye zvigadzirwa zvemahara mukuyedza kugadzira makuru anotaridzika mafoto avanogona kushandisa ipapo kune yavo webhusaiti, kuendesa kune mablog, zvigadzirwa zvekushambadzira, etc.Iyo nzira huru yekuenda kumberi kwemaitiro kana kutozviita. Lane AINGOGARA mune akanyanya kufemerwa kupfura saka kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, pandakabvunzwa kuti ndiite imwe, kana zita rake raive pane runyorwa rwevatengesi vanobatanidzwa, ini ndaigara ndichiti hongu. Izvi zvechokwadi zvakabatsira kuburitsa zita rangu kune vamwe vatengesi munzvimbo iyi, vamwe vachati uye mumakore maviri mapfupi ndakave neboka rakasimba kwazvo rakabatana revanhu vane hunyanzvi avo vandaida kushanda navo, matani evatengi uye ndakatohwina keke remuchato rakanakisa kubva ane mbiri Oregon Muroora Mipiro.
Saka sei ndiri kukuudza izvi?
Nekuti ini ndoda kuti iwe MIRA kuyera kubudirira kwako pamuchato wekuratidzira zvichienderana nemabhizinesi emabhizinesi mangani awakatambidza kana kana anga akabatikana kana kwete. Kubudirira kunouya nenzira dzakawanda uye kazhinji nenzira yausiri kana kutarisira. Ini ndinoti idya muzvizhinji zvinoratidza sezvaungakwanise. Taura nemunhu wese uye nemunhu wese. Uya nebasa rako rakanakisa. Usatya kumira kunze! Zviise kunze uko uye usatombo kunetseka nezve izvo iwe zvauchazodzoka mukudzoka. Ita kuti vanhu vakakukomberedza vatarisike uye izvo zvinodzoka kwauri. Ndino vimbisa.
Kutsvaga yemuchato show munharaunda yako? Tarisa uone ino sosi ye kutsvaga chiratidziro chemwenga pedyo newe .
yechinyakare yemuchato keke recipe kubva pakutanga
lofthouse shuga makuki asina muto wakasviba
sei kutsamwa chokoreti mu microwave isina thermometer
ndeupi musiyano uripo pakati pemakeke nemakini